FAALLO: Muxuu Talyaanigu uga tayo fiican yahay Ingiriiska? – Waxaa ka jawaabaya laacib Ingiriiska u dhashay, Talyaanigana kasoo dheeley (Qaybtii 1-aad) – Gool FM
FAALLO: Muxuu Talyaanigu uga tayo fiican yahay Ingiriiska? – Waxaa ka jawaabaya laacib Ingiriiska u dhashay, Talyaanigana kasoo dheeley (Qaybtii 1-aad)
(London) 29 Juunyo 2016 – Cawadii ay Ingiriisku ku fashilmeen inay ka foowsaan xulka da’da yar ee Iceland, waxay Talyaanigu garaacayeen xulkii koobka haystey ee Spain oo ay weliba si ay u qalmeen uga badiyeen 2-0.
Yeelkeede, dadka Ingiriisku waxay iska qaateen erayadii Roy Hodgson ee ahaa inuu xulkiisu ka kooban yahay sida uu u dhigay “da’yar, baahan, isla markaana ku sarreeya hibada kubadeed (extremely talented )”.
Haddaba, in badan bay dadku is waydiiyaan waxa ka khaldan xulka qaranka iyo xitaa kooxaha Ingiriiska oo tiiyoo ay jirto inay ka yimaaddaan horyaalka ugu qanisan caalamka aan misna soo saarin natiijo u qalanta.
Waxaa jawaabta su’aashi oo dadka qaar ku adag jawaab waaqici ah u haya nin Ingiriisna u dhashay, Talyaanina lasoo dheeley kana soo dheeley, kaasoo ah laacibkii waynaa ee Arsenal ee Davit Plat oo soo maray kooxaha Bari, Juventus iyo Sampdoria.
Intii uusan bilaabmin tartanka Euro 2016, qof kasta wuxuu filayey inay soo direen xulkii ugu liitey ee ay taariikhdooda u diraan tartan caalami ah.
Hase yeeshee, macallinkooda Antonio Conte walaa laacibiintooda midkoodna ma aaminsana inaysan ku guulaysan karin Koobka Qaramada Yurub.
Waayo? Maxaa wacay waxay la imanayaan qorshe ay koobka ku qaadaan, qorshe ay ciyaar kasta ugu guulaystaan xitaa haddii, markii nin nin loo eego, ay xulalka lidka ihi iyaga ka fiican yihiin — sida Belgium iyo Spain ay ahaayeenba.
Qorshe ayuu la iman doonaa, ama xeel kubadeed ku habboon ciyaar kasta, taasoo uu laacib kasta iibsan doono kaddibna uu si buuxda u dhaqan gelin doonto isagoo si buuxda diiradda u saaraya tafaasiil kasta.
Ma jiri doono isla waynin, ama raadinta guul iyo sarreeyn shakhsiyadeed, waxaa uun shaqayn doona qorshihii la dejiyey.
Waxaad is waydiin kartaa sababta uu Conte isagoo xamaasadaysan u taagan yahay. Waxaa ugu wacan inuu maskaxda ugu sawiran yahay qorshihii oo faahfaahsan, haddii uu hal qof qorshahaa qalloociyana, xitaa haba yaraatee, wuu xasuusinayaa.
Wax uu bedelayaa ma jiraan, balse wuxuu ku taagnaanayaa qorshihiisii ku aaddanaa sidii uu ciyaartan ku badin lahaa.
Laacibiinta Talyaanigana way u sahlan tahay inay qorshahaa fuliyaan maxaa yeelay waa kuwo leh maskax u carbisan xeesha ama taatikada ciyaarta. Sidaas baa lagu soo barbaariyey.
Laacibiinta Ingiriisku sidaa ma aha. Aniga lafteeydu sidaa ma ahayn, balse khasab bay igu noqotay markii aan Talyaaniga tegey.
Waxaan xusuustaa mid ka mid ah ciyaarahaygii iigu horreeyey ee aan u saftay Bari waxaan cayrsanayey daafac dambeed buuxa ah si aan kubadda ugu guulaysto, sidaa ayaan yeelay…..
La soco qayb kale………………..